बिरालाहरूमा पेट दर्द: कारण र उपचार | Noti बिरालाहरू
बिरालाहरूमा कुनै गुनासो नगरी दु: ख सहनको खराब बानी हुन्छ, जब सम्म यो वास्तवमै उत्साहजनक हुँदैन र उनीहरू आफ्नो दैनिक तालिकामा जारी राख्न सक्दैनन्। यो कारणले, कहिलेकाँही उनीहरूलाई कस्तो लाग्छ भनेर जान्न धेरै गाह्रो हुन्छ, वा यदि उनीहरूलाई पेट दुख्ने छ।
तपाईंलाई मद्दत गर्न, म तपाईंलाई भन्दैछु कसरी तपाइँ श suspect्का गर्न सक्नुहुन्छ वा अन्तर्ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँको साथीले पेटमा असुविधा महसुस गर्दछ.
1 बिरालाहरूमा पेट दुख्ने कारणहरू
2 तिनीहरू बिरामी छन् भने कसरी थाहा पाउने?
4 बिरालाहरूमा पीडादायी पेटको निदान
5 थप उपचार विकल्पहरू
5.3 विष उपचार
5.5 सहयोगी हेरचाह
6 बिरालाहरूमा पीडादायी पेटको रिकभरी
बिरालाहरूमा पेट दुख्ने कारणहरू
घरमा पहेलो दुखी बिराला बिरालाको पोर्ट्रेट घरमा पसेको पहेलो दुखी बिरालाको चित्र
किन रूखो व्यक्तिलाई यस्तो पीडा हुन सक्छ? धेरै कारणका लागि:
Ingestedaविषाक्त स्थिरता, वा केहि उनीहरूले गर्नु हुँदैन (जस्तै कागज, उदाहरणका लागि)।
खाएको छ बिग्रिएको खाना
धेरै धेरै कपालहरू निलिएका छन्, उनीहरूले गठन गरेको बिन्दुमा कपाल बल.
तिनीहरू संक्रमित भएका छन् आन्द्रा परजीवीहरू.
तिनीहरू बिरामी छन् भने कसरी थाहा पाउने?
यद्यपि यो जान्न गाह्रो छ, त्यहाँ धेरै विवरणहरू छन् जुन हामीलाई शंकास्पद बनाउनुपर्दछ, जुन हुन्:
जनावर सूचीहीन, दु: खी छ। तपाईं दिनभर आफ्नो ओछ्यानमा बस्न सक्नुहुन्छ।
तपाईको भोक हराउनुहोस्। जति हामी जिद्दी गर्दछौं, हरेक पटक हामी देख्छौं कि उसले थोरै नै खान्छ।
तौल घटाउनु। नखाई, वजन घटाउन अपरिहार्य छ।
तपाईं मतली र / वा बान्ता छ, विशेष गरी यदि तपाईंले केही खानुभएको छ भने, एकदम थोरै पनि। उसले के कुरा निकाल्ने प्रयास गर्दछ जसले उसलाई खराब महसुस गराउँछ।
यो छ दस्तुर, जहाँसम्म यो जहाँ बस्छ, दाग लाग्छ।
यदि उहाँलाई यी लक्षणहरू मध्ये कुनै छ भने, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले उसलाई पशु चिकित्सकमा लैजानुहुन्छ।
उपचार कारणमा निर्भर गर्दछ, उदाहरणका लागि:
यदि तपाईंले विषाक्त पदार्थहरू इनसेजेसन गर्नुभयो भने, यो दिन आवश्यक हुन सक्छ हरेक आधा किलोको लागि १ ग्राम सक्रिय कार्बन तौल को। तर कुनै केसमा तपाईंले उसलाई बान्ता गर्नु हुँदैन यदि उसले ब्लीच जस्ता कुनै संक्षारक पदार्थ पकाएको छ भने।
यदि तपाईंले बिग्रिएको खाना खाएको छ भने, यो पर्याप्त हुन सक्छ उसलाई एक नरम आहार दिनुहोस् (कुखुराको ब्रोथको साथ, हड्डी रहित) to देखि days दिन।
यदि तपाईंसँग हेयरबलहरू छन् भने, तपाईं सक्नुहुन्छ थोरै पेट्रोलियम जेली, बटर, वा माल्टको साथ तपाईंको खुट्टा समात्नुहोस्, जो चाट्न धेरै समय लिने छैन। त्यसो गरेर, तपाईं बलहरू निकाल्न सक्षम हुनुहुनेछ।
यदि तपाईंसँग शूल छ, एन्टिस्पास्मोडिक्स प्रशासन गर्नुहोस्.
यदि तपाईंसँग आन्द्रा परजीवी छ भने, तपाईंलाईaदिइनेछ antiparasitic पिपेट, वा तपाइँ तिनीहरूलाई हटाउन एक गोली दिइनेछ।
बिरालाहरूमा पीडादायी पेटको निदान
तपाईको बिरालाको अवस्थाको निदान गर्न, पशु चिकित्सकले पूर्ण चिकित्सा इतिहास चाहान्छ र शारीरिक परीक्षण पनि गर्नेछ जसले थप निदान परीक्षणहरू निम्त्याउन सक्छ। तपाईले पशु चिकित्सकलाई के प्रदान गर्नुहुन्छ सम्भावित कारणहरूलाई संकुचित गर्न ठूलो सहयोग गर्न सक्दछ। थाहा छ कि त्यहाँ कुनै खास प्रकारको खानामा कुनै प्रतिक्रिया आएको छ, खतरनाक पदार्थ वा परिस्थितिहरूको जोखिम, र तपाईंको बिरालाले देखाईएका अन्य सबै लक्षणहरूले यस प्रक्रियामा मद्दत गर्दछ।
यदि पशु चिकित्सकले यो निर्धारित गरेको छ कि थप परीक्षणहरू आवश्यक छन्, त्यहाँ केहि सामान्यहरू छन् जुन गरिन्छ। साधारण डाईग्नोस्टिक परीक्षणमा पूर्ण रक्त गणना, एक urinalysis, र एक जैव रासायनिक प्रोफाइल समावेश छ। सबै तीन परीक्षणहरू सामान्यतया सूजन वा संक्रमणको संकेतहरूको लागि जाँच गर्न प्रयोग गरिन्छ अंगहरू कत्ति राम्रोसँग काम गरिरहेको छन् भनेर जाँच्न।
परजीवीहरू संदिग्ध छ भने एक मल परीक्षण पनि गर्न सकिन्छ। पशु चिकित्सकले बायोप्सी वा पेरिटोनियल फ्लुइड विश्लेषण पनि गर्न सक्छ, जसले तपाईंको बिरालाको पेटमा तरलताको प्रकार जाँच गर्दछ यदि फ्लुइड पत्ता लाग्यो भने। अन्तमा, पेटको एक एक्स-रे वा अल्ट्रासाउन्ड लिनेछ। यी स्क्यानहरूले कुनै पनि प्रकारको सूजन, ट्यूमर, मृगौला ढु stones्गा, वा अंगहरूमा फुट्ने समस्याहरूलाई उजागर गर्न सक्छन्।
थप उपचार विकल्पहरू
पेटको दुखाइका बिभिन्न कारणहरू भएकोले उपचार योजनाहरू भिन्न हुन सक्दछन्। अब हामी तपाइँलाई केहि विस्तृत उपचार विकल्पहरूको बारेमा बताउन जाँदैछौं तर उपचारको बारेमा अघिल्लो बिन्दुमा के वर्णन गरिएको छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै।
यदि क्यान्सर वा ट्यूमर फेला परेको छ, पशु चिकित्सकले पक्कै पनि यसलाई हटाउन शल्य चिकित्सा सिफारिस गर्दछ। एक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया पनि एक फूटिएको मूत्राशय को मामला मा खोजी छ।
परजीवी इन्फेस्टेसन वा ब्याक्टेरियाको संक्रमणको मामलामा, तपाईंको पशु चिकित्सकले डिउमरस वा एन्टिबायोटिकको गोल लिन्छ। यद्यपि यी औषधिहरूले जोखिम निम्त्याउन सक्छ (जस्तै साइड इफेक्ट, प्रतिरोधको विकास), फाइदाहरू सामान्यतया ती चिन्ताहरू भन्दा बढि हुन्छन्।
यो महत्वपूर्ण छ कि उनीहरूलाई प्रशासित रूपमा प्रशासित गरिएको छ ताकि तपाईंको बिरालाले सबै सुविधाहरू पाउँदछ। केही औषधीहरूलाई सहयोगी हेरचाहको रूपमा दिन सकिन्छ। यदि तपाईंको बिराला उल्लेखनीय स in्कटमा छ भने, तपाईंको पशु चिकित्सकले पीडा कम गर्ने प्रयोगको लागि सिफारिश गर्न सक्छ।
उल्टो रोकथाम रोक्न मद्दतको लागि एन्टी-नउजेस औषधिहरू दिन सकिन्छ र दौरा हुने स्थितिमा (मुख्यतया विषाक्तताबाट) तपाईको बिरालालाई एन्टी-जब्ती औषधी दिन सकिन्छ। अरु के छ त, प्रतिरक्षा प्रणालीलाई दबाउने औषधीहरू सिफारिस गर्न सकिन्छ.
जब विषाक्तता तपाईंको बिरालोको कष्टको कारण हो, कुन विष इन्जेस्टेड भएको थियो भनेर थाहा पाए पछि पशु चिकित्सकले तुरून्त उपचार सुरु गर्नेछ, यदि सम्भव छ भने। यदि तपाईंको बिरालाले भर्खरै विष निल्यो भने, उनको पेट खाली हुन्छ र सक्रिय कोइला वा फ्लुइड थेरापी दिइन्छ खराब प्रभावहरूलाई रोक्न मद्दत गर्न। थप उपचार विधिहरू विशिष्ट विषको आधारमा फरक हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, मुसा विषाक्ततामा, पशु चिकित्सकले भिटामिन के प्रशासन गर्न सक्दछन्।
आहार जटिलताको अवस्थामा, आहारमा परिवर्तन सिफारिस गरिएको उपचार योजना हुन जान्छ। पशु चिकित्सक एक hypoallergenic आहार वा एक उन्मूलन आहार सिफारिस गर्न सक्छन्। दुबैले मद्दत गर्न र निर्धारण गर्न सक्छन् यदि तपाईंको बिल्ली एलर्जी छ।
दुखाई र एन्टी-नउसीए औषधिहरू भन्दा पर, सहयोगी हेरचाहले डिहाईड्रेसनको उपचार गर्न तरलताको व्यवस्थापन समावेश गर्न सक्छ। अरु के छ त, यदि तपाईंको बिराला प्रभावित हुन पर्याप्त दुर्भाग्यपूर्ण छ भने, सहायक हेरचाह उपचारको मुख्य रूप हुन सक्छ, किनकि भाइरल संक्रमण उच्च मृत्यु दर छ।
बिरालाहरूमा पीडादायी पेटको रिकभरी
तपाईंको पशु चिकित्सक द्वारा स्थापित उपचार योजनाको पालना गर्न महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी यदि तपाईंलाई औषधी दिइयो। निदान पेटको दुखाइको कारणमा फरक हुनेछ। रिल्याप्स केही सर्तहरूको लागि देखा पर्न सक्छ, र केहि पुरानो हुन सक्छ। तपाईंको बिरालाको भोक र अन्य कुनै पनि लक्षणहरू निरीक्षण गर्नुहोस्। यदि तिनीहरू फर्कन्छन् भने, डाक्टरलाई भेट्न तपाईंको बिरालालाई नबिर्सनुहोस्।
जुन क्षण तपाईले पत्ता लगाउनु भयो कि तपाईको बिरालालाई पेटमा दर्द हुन सक्छ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले त्यसलाई पास हुन दिनुहुन्न। यसलाई त्यस कष्टमा हुन नदिनुहोस् किनकि यो अस्थायी वा क्षणिक पीडा हुन सक्दैन ... अन्तर्निहित कारणहरू पत्ता लगाउन राम्रो हुन्छ जुन कारणले निम्त्याउँदछ र उपयुक्त उपचार छिटो भन्दा छिटो फेला पार्न सकिन्छ.
हामी हाम्रो फेरीको तालिकामा हुने कुनै परिवर्तनहरूको बारेमा धेरै सजग हुनुपर्दछ, सकेसम्म चाँडो उनीहरूलाई उपचार गर्न सक्षम हुन।
लेखको पूर्ण मार्ग: Noti बिरालाहरू » बिरालाहरू » रोगहरू » बिरालाहरुमा पेट दर्द: कारण र उपचार
के लामखुट्टेहरूले बिरालाहरू काट्छन्?
पौराणिक बिरालाको नाम